သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ethics များကို ချိုးဖောက်ခြင်း
ethics များကို ချိုးဖောက်ခြင်း
ရေကန်လေးတစ်ကန်ရှိသည်။ ထိုရေကန်လေးထဲတွင် ကျောက်တုံးလေးများ၊ ကြာပန်းများ၊ ရေဘဲကလေးများ၊ လိပ်ကလေးများနှင့် သာသာယာယာရှိလှသည်။ လေကလေး တသုန်သုန်နှင့် စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလှသည်။ ထိုရေကန်ကလေးရဲ့ ဘေးတွင် ခန့်ညားထည်ဝါသော ရုံးကြီးတစ်ရုံး ရှိလေသည်။
သူမကတော့ အသက်သုံးဆယ်စွန်းစ molecular diagnostic ဌာနမှ အရပ်မြင့်မြင့် ပိန်ပိန်ပါးပါး၊ ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့် မိန်းမအချင်းချင်းတောင် ငေးရသူဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ယောက်အမေ (single-mother) ဟု မယုံနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသူဖြစ်သည်။ သူမဖြတ်သွားလျှင် ပုရိဿတို့ လည်ပြန်ငေးကြည့်ကြရသည်။ အကျီ င်္က မလိုအပ်ပဲ ပါးနေတတ်သဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီး အလုပ်ကိစ္စများပြောကြသည့်အခါများတွင် မိန်းမများသည် မျက်စိကို မိုးပေါ်သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်တစ်နေရာရာကို လွှဲနေရသည်ကကို သူတို့အတွက် ဒုက္ခတစ်ခုလိုခံစားနေရသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အကျီ င်္အဖြူတလွှားလွှားနှင့် ဖိုင်တွဲတစ်တွဲတွဲကို ကိုင်ကာ အမြဲတမ်းအလုပ်များနေတတ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေထဲမှာ ခြေချောင်းတွေပေါ်သော ဖိနပ်စီးခွင့်မရှိသော်လည်း၊ ရေမွှေးဆွတ်ခွင့်မရှိသော်လည်း၊ သူမ တစ်ဦးတည်း၏ ခွာသံပြင်းပြင်းကို အပေါ်ထပ်ရုံးခန်းများကပင် ကြားရတတ်ပြီး သူမဘေးကဖြတ်သွားတိုင်း ရေမွှေးနံ့သင်းပျံ့ပျံ့ကို ရတတ်သည်။ သူမက အခြားသူတွေနှင့်မတူ အခွင့်အရေးထူးခြားစွာရနေခြင်းကို လူတွေက လစ်လျှူရှုထားတတ်ကြသည်။
ကျောင်းပြီးကာစ အသက်အစိတ်ခန့် ဆံပင်ကောက်ကွေးကွေးကလေးများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူဖြစ်သည်။ လှပသော ရုပ်ရည်လေးနှင့်မတန် စစ်သမီးတစ်ဦးလို တောင့်တောင့်ကြီးနှင့် ဒေါက်မြင့်ခွာကို အစွန်းကုန်ဆောင့်ပြီးလမ်းလျှောက်သဖြင့် ကော်ရစ်ဒါတစ်လျှောက် ခြေသံဆူညံနေတတ်သည်။ ဤသို့လျှောက်လွန်းသောကြောင့်ထင်သည်၊ သူမခြေသလုံးက အနည်းငယ်ကြီးနေသည်ကို စာရေးသူသည် သတိထားဖြစ်မိအောင် ထားမိလိုက်သေးသည်။
ထိုလူက ဟစ်တလာနှင့်ဆင်သည်။ အသက်က ငါးဆယ်ခန့်၊ အရပ်ပုပု၊ ဆံပင်ကို အရမ်းတိုတိုညှပ်ထား၍ ကတုံးလိုဖြစ်နေသည်။ မျက်နှာက ပြုံးမယောင်ယောင်နှင့် တည်တန့်သည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်လုံးကစားပြီး စူးစမ်းသလိုကြည့်တတ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မိန်းမများနှင့် တည်တည်ကြည်ကြည်ဆက်ဆံတတ်သဖြင့် စာရေးသူအပါအ၀င် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မိန်းမများက ယုံကြည်လေးစားတတ်ကြသည်။ ရုပ်ရည်အားဖြင့် ဟစ်တလာနှင့်တူသဖြင့် စာရေးသူသည်ဤသို့တင်စားသော်လည်း ထိုသူသည် တရားမျှတသူဟု နာမယ်ကြော်ကြားသူဖြစ်သည်။ ထိုတရားမျှတလွန်းသော ဟစ်တလာသည် အခြားသောမိန်းမအများနှင့် အလွန်အိနြေ္ဒရသော်လည်း Ergonomics ကွင်း နှင့်ဆိုလျှင် ပျားရည်ချောင်းစီးနေတတ်သည်ကို စာရေးသူသည် မျက်လွှာချလျှက် ငှက်ပျောသီးပေါင်မုန့်ကို အတင်းမြို့ချနေသည့်တိုင် မြင်နေလိုက်သေးသည်။
သူမကတော့ အသက်ငါးဆယ်ကျော်၊ လက်ပြင်အနည်းငယ်ကုန်းသည်။ အကြေကောက်ဆံပင်နှင့် ရုပ်ရည်ကဆွဲဆောင်မှု မရှိသော်လည်း ဦးနှောက်က ဆွဲဆောင်မှု အလွန်ကောင်းသည်။ အက်ရှနေသော သူမ၏ လေသံက အာဏာရှင်တစ်ဦးသဖွယ်။ ဘွဲ့တစ်လုံးတောင် မရသော်လည်း ကော်ပိုရိတ်လှေကားထစ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကွေ့ဝိုက်တက်လာသောသူဖြစ်သည်။
TDHဟု စာရေးသူခေါ်သည့် ဒီလူကတော့ အသက်လေးဆယ်နှောင်းပိုင်း၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ပိန်ပိန်ပါးပါး အသားညိုညိုဖြစ်သည်။ လူတွေကို နှုတ်ဆက်လျှင် မပွင့်တပွင့်နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သယောင်ယောင်။ သူသည် ထိပ်ပိုင်းလေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့် ရာထူးအလွန်ကြီးသူဖြစ်သည်။ သူ၏စကားသံက အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ် (British accent) လေသံနှောသဖြင့် ကနေဒီယန်-အင်္ဂလိပ်မများ အကြိုက်ဖြစ်နေတော့သည်။
လူမျိုးစုအုပ်စုများက ကင်တင်းတွေမှာ သူ့လူမျိုးနှင့်သူ သီးခြားအုပ်စုဖွဲ့ စားသောက်ပြောဆိုကြသည်။ ဒိုင်ဗာစီတီဆိုသည့် စကားလုံးများ ထည်လဲသုံးသော်လည်း အရာမရောက်မှုတို့၏ ပြယုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်သည်ဟု စာရေးသူထင်မိသည်။
မော်လီကျူးကွင်းနှင့် TDHတို့ကို ကင်တင်းထဲရှိ အုပ်စုများနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း ချောင်တစ်ချောင်မှာ အမြဲလိုလိုတွေ့ရတတ်သည်။ တစ်ဦးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာ နောက်တစ်ဦးက ပျော်ဝင်ပျောက်ဆုံးနေကြသည်မို့ အချစ်ဆိုတာဒါလားဟု ဆွပ်ပြုပ်သောက်လက်စနှင့် စဉ်းစားနေမိသေးသည်။ အနေကုပ်သော ဤလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ မော်လီကျူးကွင်းနှင့် TDH တို့၏ အပြုအမှုများက ထင်ရှားနေသည်မို့ ကျန်သူများက သူတို့ဘယ်အချိန် ပေါ်လစီပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်မလည်းဟု ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်ကြည့်နေကြသည်။ သူတို့ကို လူမှုဆက်ဆံရေးဘုရင်မက ခပ်လှမ်းလှမ်းက အမြဲစောင့်ကြည့်နေသည်။ သို့သော်.. လူမှုဆက်ဆံရေးဘုရင်မက TDH ထက် ရာထူးနိမ့်သည်။
လပေါင်းများစွာ အတူတူတွဲနေမှုများရဲ့အဆုံးမှာတော့ မော်လီကျူးကွင်းနှင့် TDHတို့ကို အတူတူမတွေ့ရတော့။ မော်လီကျူးကွင်းကတော့ ကင်တင်းထဲမှာ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အမူအယာမပျက်၊ အိနြေ္ဒမပျက်၊ ပြုံးပျော်ဆဲ။ TDH ကတော့ ကင်တင်းထဲကို ခဏသာဆင်းပြီး ၀ယ်စရာရှိတာဆင်းဝယ်အပြီး သူ့ရုံးခန်းထဲကို ပြန်တက်သွားတတ်သည်။
မကြာခင်ကာလမှာတော့ TDH ကွယ်ပျောက်သွားတော့သည်။ TDH အနှီရုံးကြီးမှလုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း မော်လီကျူးကွင်းကို သူမထက် ဆယ်နှစ်လောက်ငယ်သော ဖြူဖြူချောချော ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦးနှင့် ကင်တင်းထဲမှာ တွေ့ရပြန်တော့သည်။
TDH ကွယ်ပျောက်ပြီး မကြာခင်တစ်နေ့တော လူမှုဆက်ဆံရေးဘုရင်မလည်း အလုပ်မှ အနားယူသွားသည်။ ပင်စင်စားသွားသယောင်ယောင် သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည်။ သူမ ထွက်သွားပြီး မကြာခင်… ရုံးစာတွေ အများကြီးထွက်လာသည်။ ထိုစာအများကြီးထဲမှာမှ အောက်ဖော်ပြပါစာသည် လူမျိုးစုများကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။
From: -----------, VP Human Resources
Re: Respectful workplace – language
One of the things that makes BC so great is the mix of different cultures, food and people. We must have one of the most diverse populations in the world!
One of the areas that this wonderful diversity can present challenges is in the workplace. For example, the services we provide are high quality and essential to ------- in BC. This quality and key role we play is supported byateam of dedicated professionals working together.
I am sure that no-one would want others to feel excluded because we are speaking inalanguage that not all employees understand. People may think they are being spoken about when the discussion may be aboutafamily weekend.
So while we want to continue celebrating our rich diversity, please ensure that we speak English during work hours. If you want to talk in another language, please do so at breaks …and even then be aware that others may feel left out if you do.
Thanks for taking this seriously and respecting others at work.
ထိုနေ့ကစပြီး Tagalog နှင့် mandarin ဒိုင်ယာလောခ်တွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှ သိသိသာသာတိတ်ဆိတ်သွားသည်ကို စာရေးသူ သတိထားမိပါတော့သည်။
ဘုရင်မတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေး မဟာဘွဲ့ရလာသူတစ်ဦး အုပ်ချုပ်ရေးထိပ်ဘက်ပိုင်းကို ရောက်လာခဲ့ပြန်သည်။ မဟာဘွဲ့ပိုင်ရှင် စီအီးအိုဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ပင်စင်စားသွားသည်ဆိုသော လူမှုဆက်ဆံရေးဘုရင်မလည်း ပြန်ရောက်လာသည်။ စာတွေထပ်ထွက်လာပြန်သည်…။ သူမစာတွေထုတ်သည်။
To: All Employees in BC
From: -----, Director, ----Services; and ----, Director, ---- Operations
Re: Operations Management Restructuring
We are writing to inform you of some recent departures from ---- asaresult of the new Operations management structure. You’ll recall that when ……. first announced the task of national management restructuring, we had hoped to share the structure with you in late spring. As you know, it took much longer because we wanted to ensure we were doing the right thing and were treating those impacted fairly and with respect.
We want to recognize and thank the following individuals for their many contributions to -----over the years: -------, ---------, ---------, ---------, and --------.
Although there is no longerarole for them in our new management structure, we’re confident that they will be valuable assets to their next organizations. They are being well-supported in their transition to new opportunities.
Please join us in thanking these former colleagues and in wishing them every future success.
Restructuring isadifficult yet necessary task if we are to achieve our long-term goals of growing the business and providing the highest quality services. As we transition to our new structure, please feel free to contact anyone on the Operations senior leadership team or your HR representative with questions.
ပြုတ်သွားသော လေးယောက်ထဲမှာ မော်လီကျူးကွင်း ပါသွားသည်။
မကြာခင်မှာ စာတစ်စောင် ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလကမှ သည်ရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသော ဘုရင်မတက္ကသိုလ်မှ ထိပ်တန်းအရာရှိ၏ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော် အလုပ်လုပ်နေခဲ့သော ဟစ်တလာကို ရည်စူးသောစာဖြစ်သည်။
Organizational Announcement: ---------
This is to inform you that --------- will be leaving ------- at the end of this month --- In April I announced that our new Executive Leadership Team structure no longer includes the role of Chief Strategy and Corporate Development Officer. Since that time, ---- has been leadingavery important strategic initiative. The majority of ---’s portion of that work has now been completed.
---- hasalong and accomplished history with ---. He first joined ----in ---- as Assistant Medical Laboratory Technologist for what was then Metropolitan Biomedical Labs. After holding increasingly responsible positions in IT, ---- became Chief Information Officer in ----. He was promoted to Senior Vice President of Operations for the BC business in -----.
Please join me in thanking ---- for his contributions to the organization and in wishing him well for the future.
သည်ရုံးကြီး၏ အပြင်ဘက်မှာ ရေကန်ကလေးတစ်ကန်ရှိသည်။ ထိုရေကန်ကလေးသည် ကျောက်တုံးလေးများ၊ ကြာပန်းများ၊ ရေဘဲကလေးများ၊ လိပ်ကလေးများနှင့် သာသာယာယာရှိလှသည်။ လေကလေး တသုန်သုန်နှင့် စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလှသည်။ ရေကန်ဘေးမှ ရုံးကြီးမူကား…..
(ဒီပိုစ်ကို.. အီးမေလ်းများမှ တဆင့် မဝေမျှပါရန် မလေး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဝေမျှရလောက်အောင်လည်း မကောင်းမှန်းသိပါသော်လည်း... အကယ်၍ မတော်တဆ ဝေမျှလိုက်မိကြမှာ စိုးလို့ပါ..)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:25 AM
ကဏ္ဍ : stress burner, မလှပမှုများ
အစပိုင်း ရီရပြုံးရပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ သေချာတွေးစရာလေးတွေဖြစ်လာတယ်..။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ..ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင်ရဲ့ အသီးကို အချိန်တန်တော့ ကိုယ်ပဲစားရမှာဘဲနော်..။ အလုပ်မှာလည်း လက်သည်းအရှည်မထားရ၊ရေမွှေးမဆွတ်ရ ဆိုပေမယ့်လည်း တွေ့နေသိနေရတာဘဲ..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အဲသလိုမဖြစ်ရအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ရပါဦးမယ်..။
အပွင့်လင်းဆုံးဝန်ခံရရင် ဒီစာကို ကျွန်တော်ဥာဏ်မမီပါ... ပြန်ဖတ်ရပါဦးမယ် အထပ်ထပ်အခါခါ
ဖတ်ခါစတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ပြုံးလိုက်မိပေမဲ့ လေးနက်တဲ့ အတွေးတွေ နောက်ပိုင်းမှာ ရလိုက်တယ်... စဉ်းစားတွေးတောစရာတွေ အများကြီးဘဲ...
I'm not following u..
ဒီပို့စ်လေး ကိုကြိုက်တယ် ဖတ်တာ ၃ ခေါက်လောက်ရှိပေမယ့် ဘာမှတ်ချက်ရေးရမှန်းမသိလို့ ။
ရုံးက အရှုပ်တော်ပုံတွေပါ... ခုတလော.. အိမ်အလုပ်တွေကော၊ ရုံးအလုပ်တွေကောနဲ့.. စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့ ပိုစ်တွေကလည်း အချဉ်အနည်းငယ်ပေါက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ကွယ်..
ဒါကြောင့်.. လူသူအရောက်ပေါက်နည်းသောနေရာလေးကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. :P
French Door တစ်ဖက်မှ အသံများ